Rehefa mibaiko Jesoa, na ny Devoly aza manatanteraka. | FJKM Amboniloha
Rehefa mibaiko Jesoa, na ny Devoly aza manatanteraka.
Vehivavy mananotena iray, mpivavaka saingy tena sahirana tokoa.
Efa mila tsy ho vitany intsony ny hikaroka sakafo indray mihinana ho an’ireto zanany enina.
Niantso vonjy ity mananotena fa tena very hevitra.
Indray andro, niantso fampielezam-peo (radio) iray izy, nitady vonjy, nitaraina mafy ny momba azy sy nangataka vavaka.
Anisan’ny naheno io fandaharana io koa ilay mpisoloky milaza azy ho mpanao hatsarana iray. Henony fa ilay vehivavy mifanolo-bodirindrina aminy io niantso io. Nitsiky tsiravina ny anao lahy, andeha ho jonoiko io hoy izy.
Nitady hamingana azy ny mpanompon’ny devoly iray
Nirahiny ireto mpiasany hividy vary, siramamy, menaka, sira, izay rehetra mety ho ilaina andavan’andro. Dia nomeny baiko, atero any amin-dravehivavy ireto hoy izy. Ka rehefa manontany ravehivavy hoe avy aiza ireto entana ireto, dia lazao hoe : « Avy any amin’ny devoly ireo ».
Tonga tokoa ireto mpiasa miaraka amin’ny entana. Dia noraisin’ilay ramatoa soa aman-tsara. Ary nomeny fisaorana ireto olona nanatitra, rehefa avy nidera sy nisaotra an’Andriamanitra izy. Gaga ireto farany, tsy mba nametraka fanontaniana akory ramatoa. Izy ireo indray no nanontany hoe : « Tsy mba tianao ho fantatra ve avy aiza ireto fanomezana marobe ireto ? ». Ilay ramatoa namaly : « Tsy ilaiko akory ny mahalala izany, fantatro mantsy fa rehefa mibaiko Jesoa, na ny devoly aza manatanteraka ».
Raha sitrak’i Jehovah ny alehan’ny olona, na dia ny fahavalony aza dia hampihavaniny aminy.
Jesoa tia antsika rankizy dia miahy antsika amin’ny zavatra rehetra, ary marina ny voalazan’ny teniny hoe : « Ny zavatra rehetra dia miara-miasa hahasoa izay tia an’Andriamanitra » (Romana 8:28). Ary indrindra tsy mba voafehin’inon’inona Andriamanitra fa voalazany fa « Raha sitrak’i Jehovah ny alehan’ny olona, Na dia ny fahavalony aza dia hampihavaniny aminy. » (Ohabolana 16:7)
Catégories :	Dimy minitra	/ par AnjGab 22 septembre 2014